ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် မုံရွာ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် စစ်ကိုင်းတ
ⓘ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် မုံရွာ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့မှ အလုံသို့ သွားသည့် လမ်းမကြီးဘေးရှိ မြို့သစ်ရပ်ကွက်အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ တက္ ..
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့မှ အလုံသို့ သွားသည့် လမ်းမကြီးဘေးရှိ မြို့သစ်ရပ်ကွက်အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ်၏ အကျယ်အဝန်း မှာ ၁၄ ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင်တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့မှ ကြီးမှူး၍ အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်များကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများတွင် ဖွင့်လှစ်သွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအရ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မုံရွာ ကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့၌ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့၊ အမှတ်၂၆၀ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းတွင် ရှိသော အဆောက်အဦတစ်ခုအား ငှားရမ်း၍ အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် မိုးညှင်းသမ္ဗုဒ္ဓေဘုရားအနီး၌ အဆောက်အဦ၅လုံး ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်မုံရွာကို ထိုနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်မုံရွာကို မိုးညှင်းသမ္ဗုဒ္ဓေဘုရားအနီးမှ ယခု အလုံမြို့သစ်ရပ်ရှိ နည်းပညာကောလိပ်ကျောင်းဟောင်းနေရာသို့ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ပြောင်းရွေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်မုံရွာကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၂၀ရက် ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ သပန/၃-၂၂/၂၀၀၇၅၉၂ အရ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မုံရွာအဖြစ်သို့ စတင်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မုံရွာမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ပဉ္စမနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ သင်တန်း
တတိယနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ သင်တန်း
ဒုတိယနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ သင်တန်း
တတိယနှစ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ သင်တန်း
ဒုတိယနှစ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ သင်တန်း
ပထမနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ သင်တန်း
ပဉ္စမနှစ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ သင်တန်း
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မုံရွာမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဘွဲ့ဒီဂရီများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ မဟာဘွဲ့ M.C.Sc.
ကွန်ပျူတာနည်းပညာ မဟာဘွဲ့ M.C.Tech.